Akụkọ banyere Oukitel: igwe, nyocha, weputara na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporosis
Ugbu a anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke akara ekwentị na gam akporo. Otu n'ime ụdị ndị kachasị ọhụrụ anyị na-ahụwanye ugboro ugboro n'ahịa bụ Oukitel. Ọ bụ aha na-amalite ịmalite ewu ewu, n'agbanyeghị na ọ bụ ụlọ ọrụ na-adịbeghị anya.
Oukitel hiwere na 2007 na obodo Shenzhen na China. Enwere ike ịkọwa obodo a dị ka isi obodo teknụzụ nke mba ahụ, ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ nọ na mpaghara ahụ. Ọ bụ rue 2008 ka igwe izizi ika ahụ bidoro kụrụ ụlọ ahịa. Na 2009, ha nwetara akụkụ nke mgbasawanye mba ha site na mmeghe nke nnukwu ụlọ ọrụ ha na China. Kemgbe ahụ, Oukitel nọ na-arụ ọrụ niche na ahịa gam akporo.
Isi ahịa ya bụ ndị Eshia, nwere mba dịka China ma ọ bụ Korea. Ma ruo ogologo oge ọ dị mfe ịzụta igwe ha na Europe. Oukitel na-ebupụta ụdị nwere ọnụ ahịa dị ala mana ọ nwere ezigbo nkọwa. Ọ na-elekwasịkarị anya na etiti etiti na ntinye ntinye. Ha na-apụtakarị maka nnukwu batrị ha.
Oukitel WP15: nkọwa, ọnụahịa na nnweta
Oge 5G dị ebe a, mana enwere ihe dị mma karịa inwe 5G na ekwentị anyị? Ee, dabere na ...
WP15 bụ ekwentị ọhụrụ Oukitel nwere batrị 15.600 mAh
Batrị ka bụ otu n'ime isi ọwụwa maka ọtụtụ ndị nrụpụta na ndị ọrụ….
Oukitel WP6 ọhụrụ ahụ na-ere ahịa na Machị 20 ọzọ
Mgbe ịzụrụ ekwentị ọhụrụ, ọ bụghị naanị na anyị ga-adabere na ọnụahịa ahụ, ọ bụ ezie na ọ na-abụkarị isi ...
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị agwala gị na OUKITEL C17 Pro ga-arụ ọrụ nwa oge na ọnụahịa kachasị mma. A
Chọpụta otu ị ga-esi nweta OUKITEL C17 Pro
Otu izu gara aga, anyị zutere OUKITEL C17 Pro na eze. Ihe omuma ohuru nke ndi China, nke ...
OUKITEL C17 Pro, juru ya anya site na igwefoto ya okpukpu atọ
por Rafa Rodríguez Ballesteros eme 2 afọ .
E nwere ọtụtụ posts anyị raara nye OUKITEL smartphones. Na nnukwu akụkụ n'ihi na ...
Debe Oukitel Y4800 ọhụrụ maka naanị $ 199
N'ime izu ndị na-adịbeghị anya, anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere ọdụ ọzọ nke ụlọ ọrụ Asia Oukitel ga-ebupụta n'ahịa, ...
Ọhụrụ OUKITEL Y4800, 48 Mpx na ọtụtụ ndị ọzọ
Onyinye nke smartphones dị n'etiti etiti gam akporo na-aga n’ihu n’eto n’enweghị nchịkwa. Na anyị na-ahụ ka ọ si apụta oge ọ bụla ...
Anyị na-ekwu maka mbubata Oukitel na-esote ọtụtụ izu. Anyị na-ekwu maka Y4800 na-eto eto, ọnụahịa ebubere maka ...
Oukitel na-enye C15 Pro +, nsụgharị vitaminized nke C15 Pro
Worldwa nke telephony abụghị naanị nke ọnụ ọgụgụ dị elu mejupụtara, ọ bụ ezie na ha bụ ụdị nke kachasị ...
Oukitel Y4800 na Xiaomi Redmi Rịba ama 7: ule arụmọrụ
Mgbe ị na-emegharị ọdụ ochie anyị, anyị ga-eburu n'uche ọtụtụ ihe iji nwee ike ikpebi, ee e ...
OUKITEL K6, anyaụfụ nke etiti